Maleeshiyaad hubeysan oo gubay Guryo ku yaal tuulooyin hoostaga Beledweyne | Banaadir Times
HomeUncategorisedMaleeshiyaad hubeysan oo gubay Guryo ku yaal tuulooyin hoostaga Beledweyne
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay maleeshiyaad hubeysan ay gubeen tuulooyin ku yaal Waqooyiga Magalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay kajireen xiisado dagaal.
Tuulooyinka la gubay ayaa waxaa kamid ah tuulada Bacaad Buuko, halkaas oo meel u dhow ay isku hor-fradhiyaan laba maleeshiyo beeleed oo dhawaan ku dagaalamay, kuwaas oo kulamo lagu xalinayo ay ka socdeen Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in uu jiro khasaaro dhaawac ah iyo burbur hantiyadeed, iyada dadka tuulada la gubay ku nool ay bilaabeen inay isaga barakacaan sababo la xiriira in anooyin qabiil loo dilo.
Maas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan weli kama hadlin Guryaha la gubay ee ku yaal tuulooyin hoostaga Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, hayeeshee maalmihii la so dhaafay ayaa waxaa ay wadeen shirar xal looga gaarayo labada maleeshiyo Beeleed ee dagaalantay.
Previous articleHay’adaha Garsoorka oo dib u bilaabaya dacwadaha aan ciqaabta aheyn
Next articleWariye Axmed Xuseen Cadoow oo geeriyooday